Tahriibayaal Itoobiyaan ah oo lagu dilay duleedka Hargaisa – Radio Daljir
Agoosto 23, 2019 8:49 b 0
Koox hubaysan ayaa magaalada Hargaisa ee xarunta mamaulka Soomaaliland waxa ay ku dishey labo ruux oo Ethiopian ah waxayna ay ku dhaawaceen labo kalana, kadib markii ay rasaas ku fureen gaari marayay duleedka magaalada Hargeysa.
dadkan ayaa kamid ahaa tahriibayaal ka yimid dalka Itoobiya kuwaas oo marinkooda koowaad uu yahay magaalada Hargaisa.
Afarta qof waxaa ku jiray laba ruux oo haween ah.
ciidamada booliska mamaulka Hargaisa ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen raggii ka dambeeyay weerarka lagu qaaday gaariga ay saarnaayeen tahriibayaasha.
ma aha markii ugu horaysay oo dad udhashay Itoobiya lagu dilo magaalada Hargaisa ee xarunta uah maamulka Soomaaliland.